Mwenje yeguta inosimbisa iyo yakasarudzika theme ye skateboard ine zvinhu zvehusiku mwenje nguva. Iyo pfungwa yekufamba, inoshanda inoshanda ruzivo uye modular ruzivo inovandudza iyo yakakosha skateboard zvinhu. Inogona kuenderana nemavara akajeka ehupenyu hweiri lime green, electro-optic yepepuru uye yakangwara bhuruu ine chete vara kuratidza pfungwa yekusiyanisa.
1. Iyo yakawanda-inoshanda inodzoserwa mhepo yekuvhuvhuta inogona kusangana nemamiriro anochinja emamiriro ekunze mamiriro muchirimo. Iyo yekupwanya mhepo ine inopenya zipi inoshandisa modular homwe, maviri-mativi ekupfeka mabasa uye akasimbisa fluorescent trims kuratidza anoshanda zvinhu.
2. Machira akapfava uye anobata-ganda akadai senylon anoshandiswa kugadzira skateboard zvikabudura. Iwo ekuisa anoisa mukati kana mitsetse mitsara inowedzerwa pane yakasununguka pateni kuratidza yazvino mwenje mhedzisiro, iyo inoratidza inoshanda pfungwa nekushandisa inogadziriswa mabhureki pane chiuno bhandi.
3. Iyo yakajeka psychedelic ruvara inowedzera fluorescent mhedzisiro paruvara rwemberi rwechitema kana chewhite chena, iyo marble mitsetse inogadziridza iyo tie-yakadhinda mhedzisiro mhedzisiro, iyo inozivikanwa dhizaini muchirimo uye zhizha 2021.
4. Mukutsvaga kunyaradzwa kwakanyanya, iyo Tannin dhizaini yatendeukira kune yakafararira uye yakasununguka dhizaini kubva kuma1990, iyo hemmed dhizaini yakasarudzwa kuchengetedza nzvimbo yekukura kwevana uye kukwirira. Iwo mavara akajeka senge bio lime green uye electro violet inogona zvakare kuenzaniswa neye nhema uye chena monochrome, iyo inowedzera inoshamisa inoshamisa yakajeka pane dhizaini.
5. Iyo asymmetric cheka & yakasonwa pani inotsiva yemitambo, iyo ine simba reruvara ruzivo rinotonga mwaka wapfuura mwaka, asi iyo yazvino uye inonakidza asymmetric cheka & yakasonwa pani inofarirwa mwaka uno. Iko musika kutarisisa kwekucheka kwekutanga uye kusonesa ndeye kushandisa mavara uye akadhindwa machira kugadzira pfungwa yekusiyanisa.
6. Iko kushongedza kunozivikanwa kunowedzera mbatya dzemitambo. Iko kusanganiswa kwemavara akajeka uye akakurumbira ehembe dzemitambo kunoita izvo zvinozivikanwa ruzivo kuve mutsva maitiro. Iwo anozivikanwa ezvemitambo akadai sekumonera, zipi mitsetse tepi uye dhizaini inozivikanwa mune zvemitambo nhevedzano.
Post nguva: May-06-2020
Yedu yekugadzira timu inopa izvo zvigadzirwa zvigadzirwa zvehupamhi-mhando standard, ivo vanotengesa mushe pasirese.